Macaamiisha ugu wanaagsan ee daadka ah, si deg deg ah oo ka sii fiican ula soo deg iyaga | Wararka Gadget
Teknolojiyada P2P, oo ay aad ugu tiirsan tahay ku daydo maaddaama Bittorrent loo beddelay si loo bixiyo koronto ballaaran. Bittorrent waa borotokool isweydaarsiga feylka, laakiin emule ka duwan, kumbuyuutar kasta wuxuu noqdaa isha dhammaan qaybaha faylka ee illaa hadda la soo dejiyey, sidan, degsashada faylasha aad ayey u dhakhso badan tahay.
Laakiin, si ka duwan emule, Tiknoolajiyada Bittorrent waxay ubaahantahay raad qaadayaal, si macmiilka Torrent uu u ogaado halka uu aadayo si uu u soo dejiyo waxa ku jira, isagoo gebi ahaanba lagama maarmaan u ah inuu bilaabo soo dejinta nooc kasta oo maaddooyin ah. Haddii aadan aqoon macmiilka Torrent ee aad dooranaysid, markaa waxaan ku tusi doonnaa wuxuu yahay macmiilka ugu fiican kuwa hadda laga heli karo suuqa.
1.1 Astaamaha gudbinta
7 Si aad u tixgeliso
8 Macaamiisha Torrent ee Android
9 Macmiilka Torrent ee iPhone
Ficil ahaan tan iyo markii ay timid suuqa 13 sano kahor, Gudbinta ayaa noqotay qalabka ugu fiican ee suuqa marka ay timaado soo degsashada faylasha iyada oo loo marayo Bitorrent. Tranmission waa codsi gabi ahaanba bilaash ah oo furan. Sannadihii ugu horreeyay, waxaa loo heli jiray oo keliya nidaamka deegaanka ee desktop-ka Apple, laakiin maanta waxay na siineysaa nooc ku saabsan nidaamka deegaanka ee Windows iyo Linux.
Sidoo kale wuxuu na siinayaa nooc loogu talagalay NAS kala duwan oo ka socda soosaarayaasha waaweyn, sida Synology, Western Digital, D-Link ... oo noo ogolaanaya inaan qaabeyno aaladda si aan ula wareego soo dejinta waxyaabaha aan ubaahan inaan adeegsano kumbuyuutarkeena. Tranmission wuxuu na siiyaa ikhtiyaarka ah inaan si toos ah u ogaanno soo dejinta faylalka .torrent ee kombiyuutarkayaga, sidaa darteed markii la soo dejiyo, codsigu wuu aqoonsadaa wuxuuna bilaabaa soo dejinta, isagoo tirtiraya .torrent u dhigma.
Taariikhdeeda waxay la kulantay weeraro kala duwan server-keeda, taas oo ku qasabtay shirkadda inay martigeliso noocyada la heli karo ee keydka GitHub. Haddii aad raadineyso macmiil fudud oo bilaash ah oo Torrent ah, Tranmission ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee aan hadda ka heli karno suuqa.
Xulashada iyo soo-dejinta mudnaanta ee feylasha iyadoo loo eegayo baahiyahayaga.
Khariidaynta dekedda otomaatiga ah
Mamnuucida otomaatiga ah ee macaamiisha soo gudbiya xog been ah.
Taageerada trackers badan
Qalab khaas ah oo la adeegsan karo.
La jaan qaada xiriiriyeyaasha Magnet.
Soo Degso Gudbinta
Waa maxay uTorrent iyo sida loo isticmaalo
Laga soo bilaabo halyeeyga sida Gudbinta waxaan noqonaa mid cusub oo cusub, laakiin taasi waa sababta aan uga saari kari weyno isla markiiba fiidmeerta. WebTorrent gabi ahaanba waa bilaash, waa ilo furan mana na siiso nooc xayeysiis ah, wax lagu mahadiyo runtiina ay adagtahay in lagu gaaro macmiilka noocan ah.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ay naga siiso ixtiraamka macaamiisha kale ee Torrent, waxaan uga helnay taas waxay awood u leedahay inay soo dejiso fiidiyowyo iyada oo loo marayo AirPlay, Chromecast iyo DLNA, muuqaal ah macaamiil aad u tiro yar ay bixiyaan. Waxay la jaan qaadi kartaa iskuxirayaasha 'Magnet' iyo .torrent oo howlgalkoodu u fudud yahay sida u jiidayo feylasha .torrent ee arjiga si aad u bilowdo soo dejinta.
Sida magaceedaba ka muuqata, WebTorrent sidoo kale way noo oggolaanaysaa maareeyaan soo dejinta adoo adeegsanaya biraawsar webka, ikhtiyaar aan waligiis lagugula talin tan iyo haddii aan xirno biraawsarka soo dejintu way istaagaan, laakiin waxay ku habboonaan kartaa dadka isticmaala ee maalin ku qaata furaha furan.
WebTorrent ayaa loo heli karaa Windows, Mac, iyo Linux. Soo Degso WebTorrent
Haddii aad rabto asturnaan markaad ka soo degsanayso noocyada faylasha noocan ah internetka oo waliba aad leedahay ciyaartoy isku dhafan, macmiilka ugu fiican ee aan ka heli karno waa Tarayar, macmiil waxay isticmaashaa shabakadeeda u gaarka ah iyadoo adeegsaneysa seddex server oo wakiil ah inta udhaxeysa diraha iyo qaataha feylasha. Laakiin haddii ikhtiyaariyada asturnaanta ee ay na siiso aysan ku filnayn, ka mid ah xulashooyinka qaabeynta waxaan ka heli karnaa xulashooyin ku dhalan kara kuwa ugu xiisaha badan asturnaanta.
Ka xun, sida Gudbinta iyo WebTorrent gabi ahaanba waa bilaash, waa il furan oo ay kujirto mashiin raadin torrent ah oo ina tusaya feylasha lagu soo dejinayo barnaamijyada adeegsadaha. T ta'ereyaasha waxaa loo heli karaa Windows, Mac iyo Linux. Download Naxdin.
Vuze wuxuu ku dhacay suuqa 2003, sanadihii la soo dhaafay, wuxuu hagaajiyay ma aha oo kaliya isdhaafsiga isticmaalaha, laakiin sidoo kale tirada shaqooyinka iyo xulashooyinka ay na siiso. Vuze wuxuu iskuxiraa a mashiinka raadinta torrent, sida loo yaqaan 'T ta'rs' dhammaan faylasha lagu wadaago barnaamijkaaga.
Vuze looguma talogelin oo keliya soo degsashada faylasha xuquuqda daabacan, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan la wadaagno faylasha sharciga ah dadka kale wadahadal in codsigu sidoo kale na soo bandhigo, hab ku habboon oo aan ku wadaagi karno feylasha waaweyn iyada oo aan loo baahnayn in la adeegsado shabakadaha noo oggolaanaya in aan dirno faylal waaweyn.
Vuze waxaa lagu heli karaa laba nooc, mid leh xayeysiis aan noo oggolaaneyn inaan ku ciyaarno waxyaabaha inta la soo dejinayo ama na siinaya difaac ka dhan ah antivirus iyo mid kale oo leh xayeysiis, kaas oo lagu qiimeeyo $ 9,99, kaas oo na siinaya labadan ikhtiyaar marka lagu daro noo oggolaanaya inaan duubno faylasha aan kala soo baxno DVD.
Vuze waxaa loo heli karaa Windows, Linux, iyo Mac. Soo dejiso Vuze.
Mid ka mid ah macaamiisha ugu caansan adduunka ee Bitorrent waa uTorrent, mid ka mid ah macaamiisha na siisa faa'iidooyinka ugu fiican marka laga hadlayo isticmaalka kheyraadka. Codsigu wuxuu ku fadhiyaa oo keliya 2 MB, markaa waxaan heli karnaa fikrad ku saabsan ilaha yar ee ay ku qabsan karto nidaamkeenna, sidaas darteed waxay ku shaqeyn kartaa asalka iyada oo aannaan ogeyn waqti kasta.
Laakiin sii iftiin macnaheedu maaha ina siin mayso ikhtiyaarro habayn ah, maadaama uTorrent ay noo ogolaaneyso inaan shaqsi ahaan ama si wada jir ah u maamulno soo dejinta sidoo kale noo ogolaanaya inaan si fog uga maamulno taleefannada casriga ah.
Haddii aan rabno inaan wax badan ka helno Torrent, sida ciyaarida fiidiyowyada la soo dejiyey ama ciyaaro waxyaabaha la soo dejinayo, lagu ilaaliyo fayraska, faylalka la soo dejinayo u wareejinaya qalabka bartilmaameedka ah ama aanad u baahnayn inaad soo degsato koodhadh, waxaan fursad u leenahay inaan ku iibsano nooca Pro, oo qiimihiisu yahay 22 euro.
Torrent waxaa loo heli karaa Windows, Linux, Mac, iyo Android. Download Torrent.
Laakiin haddii waxa run ahaantii waxaan jecel nahay xulashada qaabeynta inaad awood u yeelatid inaad xakameyso marwalba sida feylasha loo soo dejiyo, bandwidth-ka uu adeegsado arjigu, halkaasoo ay ku keydsanyihiin feylal ku meel gaar ah iyo feylasha la soo dejiyey, qadarka ilaha nidaamka ee loo qoondeeyey arjiga ...
Bitorrent waa mid ka mid ah macaamiisha ugu fiican ee suuqa ku jira, waxaana lagu heli karaa seddex nooc, mid gabi ahaanba bilaash ah oo la shaqeeya laakiin xayeysiis ah, mid kale oo aan lahayn xayeysiis ah $ 4.95 sanadkii iyo nooca Pro. Nooca Pro, oo lagu qiimeeyo $ 19.95 sanadkii, marka lagu daro xayeysiinta ka socota The Codsigu wuxuu na siinayaa qalab fiidiyow ah oo la dhisay, ilaalin antivirus, adeegga macaamiisha, iyo sidoo kale noo oggolaanaya inaan u beddelo soo dejinta si aan ugu ciyaari karno qalab kasta.
Bitorrent ayaa loo heli karaa Windows, Mac, iyo Android. Soodejiso Bitorrent
Inta badan macaamiisha daadka ah waxay noo ogolaaneysaa inaan isku xirno isla xulashooyinka, ugu yaraan aasaasiga. Ilaa aynaan dooneyno inaan si gaar ah u adeegsanno macmiil durdur leh, waxa ugu wanaagsan ee aan sameyn karno waa inaan adeegsanno mid bilaash ah ka dibna aan u adeegsanno ciyaaryahanka VLC, oo la mid ah macaamiisha daadka ah ee na siiya ciyaaryahan isku dhafan.
Marka laga hadlayo ka hortagga fayraska, haddii aad inta badan isticmaasho isla degel si aad u soo dejiso durdur, oo aanad wax dhibaato ah kala kulmin illaa hadda xagga cudurrada, si daacadnimo ah uma baahnid barnaamij noocan ah. Intaas waxaa sii dheer, bulshada ayaaba masuul ka ah tirtirida ama soo sheegida feylasha foosha xun ee ay kujiraan fayrasyada ama aan aheyn waxa dhabta magacu tilmaamayo.
Macaamiisha Torrent ee Android
In kasta oo ay run tahay in filimada, muusikada iyo codsiyada oo keliya aan lagu wadaagin shabakadda Bittorrent, in kasta oo ay metelaan 99% isticmaalkooda, Bittorrent sidoo kale waa loo isticmaali karaa wadaag faylasha yar yar in aynaan ku wadaagi karin email ahaan. Ujeeddooyinkaan awgood, codsiyada daadka ayaa macno samaynaya.
Waqtigan xaadirka ah suuqa, waxaan kaliya ka heli karnaa laba barnaamij oo Android ah taas oo noo oggolaaneysa inaan ka soo degsanno feylasha durdurka qalabkeenna moobiilka ay maamusho Android. Waxaan ka hadleynaa uTorrent iyo Bittorrent, oo ka mid ah macaamiisha ugu caansan desktop-ka adduunka oo dhan isla markaana inta badan loo isticmaalo soo dejinta feylasha durdurrada. Labadaba waxaa loo heli karaa soo dejin gebi ahaanba bilaash ah iyada oo loo marayo xiriirka soo socda.
µTorrent® - soo dejiso torrent
BitTorrent®-Torrent Soo Degsade
Macmiilka Torrent ee iPhone
Macaamilka Bittorrent ee qalabka mobilada kaliya ayaa macno samaynaya haddii aan u isticmaalno si aan ula wadaagno faylasha aan boos ku laheen adeegga boostada caadiga ah, adeegyada aan guud ahaan noo oggolaanayn inaan dhaafno 25 MB lifaaqyo. Apple waxay leedahay xal fiican oo noocan ah xalka, maadaama ay faylalka u soo daadiso iCloud ka dibna fariin u dirto qaataha oo leh xiriiriye si ay u soo dejiso.
Laakiin haddii aan rabno inaan adeegsanno macmiil ka tirsan shabakadda Bittorrent, oo ku taal App Store ma heli karno barnaamij rasmi ah taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan maamulno, maadaama ay jabinayaan tilmaamaha App Store iyagoo kuu oggolaanaya inaad soo dejiso waxyaabaha ku qoran xuquuqda daabacaadda. Laakiin haddii qalabkeennu jaban yahay, waxaan isticmaali karnaa barnaamijka 'iTransmission application', codsi laga heli karo dukaanka arjiga ee Cydia.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Macaamilka ugu fiican
Apple waxay xaqiijineysaa in Mac Pro uu suuqa gali doono sanadka 2019